Home Wararka Maanta XOG: Guux cusub oo kasoo baxay Villa Soomaaliya & isbadelo siyaasi oo...
XOG: Guux cusub oo kasoo baxay Villa Soomaaliya & isbadelo siyaasi oo dhacaya
Wararka hoose ee ka imaanaya Villa Soomaaliya ayaa sheegaya in Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kulamo gaar gaar la yeeshay siyaasiyiin iyo xubno kasoo jeeda Beeshiisa.
Oday dhaqameed ka mid ahaa xubnaha la kulmay Madaxweynaha ayaa sheegay in isbuucaan la isku afgartay kuraasta taalla Gobolka Gedo aan la hoos geyn doonin Jubbaland.
Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa weli ku doodaya in kuraasta Garbahaareey taalla isaga la hoos keeno islamarkaana uu talo ku yeesho balse taas waxaa diiday Madaxweyne Farmaajo.
Wasiirkii hore ee qorsheynta Jubbaland Aadan Ibraahim aw xersi oo siyaasad ahaan ku faraq xirtay Xafiiska Madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay in loo xilsaaray arinta gobolka gedo iyo xildhibaanada ka imaanaya.
Aw xersi oo kala hadlay Arimaha doorashada fahad yaasiin iyo Madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay in la isku raacay sidii loo heli lahaa xildhibaano codka siiya Nabad iyo nolol,kuraasta taalla garbahaareeyna ay noqdaan kuwo la xiro dad gaar ahna lasoo saaro.
Guuxa cusub ee Warbaahinta Badweytims ogaatay ayaa sheegaya in tartanka Mucaaradka kula jiraan Madaxweyne farmaajo doorashada gobolka gedo,kuraasta taalla Baraawe,Mida lagu dooranayo Gaalkacyo iyo Kuwa Muqdisho ay noqdeen mid aad ugu adag.
Axmed Madoobe ayaa isku dayey in sanadkaan hor istaago Xildhibaan C/raxmaan Kulmiye Xersi (C/raxmaan Dheere) oo gacan yare u ah Fahad Yaasiin Xaaji Daahir,balse kursigiisa lasii xiri doono oo dib udifaacan karo.
Shirar dib udoorashada madaxweyne Farmaajo looga hadlayo ayaa deg deg uga bilaaban doona Muqdisho iyo gobollada Dalka,waxaana lacago badan lagu bixinayaa qorsheyaal ay ku jiraan sidii geed dheer iyo mid gaaban lagu soo celin lahaa xukunka Dalka oo Nabad iyo nolol usii joogi laheyd.
Hamigaasi Farmaajo isagoo leh ayaa hadana mucaaradka waxay bilaabeen isgarabsi si hoose ah,xilli Xasan Cali Kheyre uu budo gaar u tuman yahay oo iskiis ugaar ordaya si uu uhelo xilka madaxweynaha soomaaliya utaagan yahay.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir,Siyaasi Cabdi Nuure Siyaad,Cali Maxamed Geedi iyo Qawaamuurta Nabad iyo nolol ayaa waxay madaxweynaha ku qanciyeen in Muqdisho ku awood badan yahay Islamarkaana Hirshabelle,KGS,Galmudug & Kuraasta Banaadiriga iyo mid gobollada wuqooyi badankood heli karo dibna guusha labaad xukunka dalka uheli karo.
Lama saadaalin karo waxa isbadel imaan doona balse Villa Soomaaliya xogaha hoose waxay sheegayaan in si walbo oo Xukunka dalka lagu soo celin karo Farmaajo lagu heshiiyey in la sameeyo xoog iyo xeelad siyaasadeed iyadoo la adeegsanayo iyo dhaqaale bixin daba socoto loo arko cid walbo oo muhiim ah dib usoo doorashada Maxamed C/llaahi Farmaajo.